Erey Somalida Aad u Isticmaasho Oo Macno Cajiib ah Ku Fadhiya#Ogow Sir Kaa Duugneyd | Xaqiiqonews
Erey Somalida Aad u Isticmaasho Oo Macno Cajiib ah Ku Fadhiya#Ogow Sir Kaa Duugneyd
Waxaan Isticmaalnaa si maalin la ah Ereygan “bis” tusaale “waxaan Bis iga dheh” ,”Biya badan maanta ma cabi karo bis waaye”,”cuntada intaa ka badan Waa iga bis” “shaqada hadiiba sidaas ay tahay waa iga bis“.
Inkastoo isticmaalkan ereygan uu ku soo noqnoqdo afkeena, hase ahaate asalka ereygan waa mid ajnabi ah (mid aan ka soo amaahanay luuqado kale).
Tusaale ahaan waxaa ereygan isticmaalo luuqadaha Europe looga hadlo qaarkood sida Ingiriiska, Faransiisaka,Taliyaanika,Sapanishka iyo waliba Jarmalka.
dhamaan luqadaha aan Kor ku xusnay Waxa ay ereygan U isticmaalaan macno markii afkeena loo tarjumo noqonaayo “ku Celi” tusaale Ingiriiska ( Bis your speak) , Taliyaani (Bis tuo parlare), Faransiiska (Bis votre parler) Jarmalka (Bis du sprichst) Isbaanishka (Bis tu habla).
Dhamaan Weerooyinka aan tusaalaha u soo qadanay Ereyga Bis waxa uu ka Dhigan Yahay “Ku Celi” balse marka Ereygan uu ku dhax jiro ereyada Soomaaliga waxaa uu qaadanayaa Macno ka duwan dhamaan, waxaa uu noqanayaa “jooji” tusaale “Bis Hadalka”.
Isku soo duub, Waa arin looga baahanyahay In ay ka soo jawaabaan Khubarada Xagga luuqadda, Sababta Keentay Macno Dabagedinta intaa la eg, Markii uu Ereygan U soo talaabay xaduudka Somalia?